कानून: बदला अश्लील खतरनाक र अवैध छ इनाम पुरस्कार
कानुन बदला अश्लील
सेक्टिङसँग सम्बन्धित नयाँ, छिटो फैलिएको घटना "बदला अश्लील" हो। यो नग्न र असहाय तस्बिरहरूको अनलाइन वितरण हो जुन बिना विवाहको उद्देश्यमा प्रायः महिलाहरु को अपमानित र हानिकारक प्रयास गर्न को लागी बिना सहमति हो। मानिसहरूले प्राय: इन्टरनेटबाट हटाइएका तस्विरहरू गाह्रो भएका छन्। धेरै साइटहरू जहाँ तस्बिर होस्ट गरिएका छन् बेलायतका बाहिर आधारित हुन्छन्, र सामग्री हटाउने अनुरोध प्राय: उपेक्षा गरिन्छ।
अप्रिल 2017 मा, स्कटल्याण्डमा बदला अश्लीलको नयाँ नियमलाई बलियो बनाइएको थियो दुर्व्यवहार व्यवहार र यौन हर्म अधिनियम 2016। खुलासा वा एक अंतरंग फोटो वा भिडियो खुलासा गर्न को लागी अधिकतम दण्ड5सालको कैदी हो। अपराधमा निजी तस्बिर लिईएको छ जहाँ कसैलाई नग्न थियो वा केवल अंडरवियरमा वा यौन काममा व्यस्त व्यक्ति देखाइन्छ।
बदला अश्लील पनि इङ्गल्याण्ड र वेल्समा एक आपराधिक अपराध हो। इजरायलले संसारको पहिलो देश यसलाई अवैध बनाउन र यो यौन अपराधको रूपमा व्यवहार गर्नु थियो। सजाय, यदि सजाय हो,5वर्ष सम्म जेलमा छ। ब्राजिलले यसलाई गैरकानूनी बनाउन एक बिल पनि पेश गरेको छ। संयुक्त राज्यमा, न्यू जर्सी र क्यालिफोर्नियाले त्यही अन्त्यमा नेतृत्व लिइरहेको छ। क्यानाडामा, एक जेएनएमएक्सएक्स वर्षकी केटी बाल पोर्नोग्राफीको निधनमा दोषी ठहरिएको थियो। उनले आफ्नो प्रेमीको पूर्व प्रेमिकाको नग्न तस्विरलाई उत्तेजित पारेकी थिइन।
मद्दत गर्न संसाधनहरू समावेश छन् बदला लिन पोर्न मद्दतलाइन र स्कटिश महिला एड्स.
<< कसले के गर्छ? अपराधमा उदय >>